चिसो कट्टु लाउनुहुन्छ, होसियार ! मृगौलाको पत्थरी होला – ताजा समाचार
चिसो कट्टु लाउनुहुन्छ, होसियार ! मृगौलाको पत्थरी होला
काठमाडौँ : महिलाहरू आफ्ना भित्री वस्त्रलाई लिएर निकै संवेदनशील हुन्छन्। कतिपय महिलाले लाजका कारण पनि भित्री कट्टु धोएर घाम लाग्ने खुल्ला ठाउँमा सुकाउन हच्किन्छन्।
कट्टुलाई प्रत्यक्ष घाममा नसुकाई लगाउँदा भने विभिन्न शारीरिक समस्या निम्तिने जोखिम बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ। हिउँद याममा त यो समस्या झनै बढी देखिने गर्छ।
भित्री लुगाको सरसफाइमा ध्यान नदिनाले पिसाबसम्बन्धी संक्रमण (युरिनरी ट्रयाक इन्फेक्सन) कोजोखिम समेत रहन्छ। ब्याक्टेरियाबाट फैलिने यो रोगबाट जोगिन भित्री वस्त्रलाई राम्ररी धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ।
तस्विर । घाममा सुकाएका भित्री बस्त्र ।
नत्र यसै कारण महिलालाई यो’निमा हुने संक्रमणबाट पाठेघरको कुनै पनि रोग लाग्न सक्छ। धेरै पटक त यस्ता संक्रमण सन्तान उत्पादन क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। राम्ररी घाममा नसुकाइएको भित्री लुगाले दाद आउने, चिलाउने आदि समस्यासमेत देखिन सक्छ।
लुगाफाटोमा लवण रहेकैअवस्थामा उपयोग गर्दा छालाको संक्रमणसमेत देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ। यौ’नांग छेउछाउको छाला धेरै कमलो हुने भएकाले त्यहाँ छालाको संक्रमण अन्य ठाउँको दाँजोमा छिटो हुन्छ। यसैले छालाको संक्रमणको मुख्य कारणमध्ये एउटा सरसफाइको कमीलाई समेत मानिएको छ।
यतिसम्म कि भित्री वस्त्रले मृगौलाको रोगसम्म निम्त्याउँछ। स्मरण रहोस्, ब्याक्टेरियाद्वारा उत्पन्न संक्रमणले मृगौलाको पत्थरी पनि हुन सक्छ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : October 2nd, 2019,